« An’iza ny lamba mihahy ? » : somary niverenan’i Goth ilay fomba fitondrana fampisehoana | NewsMada
« An’iza ny lamba mihahy ? » : somary niverenan’i Goth ilay fomba fitondrana fampisehoana
Seho roa misesy, nahasarika olona hatrany ny nataon’i Goth ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny CCEsca Antanimena. Tamin’ny alalan’ny resaka mifampitohy mahakasika lafin-javatra maro ny nitondrany ny fampisehoana. Nampahatsiahy ilay fomba fitondrana fampisehoana anisan’ny nahafantarana ity mpanao hatsikana ity tany am-piandohana.
Nandritra ireo seho ireo ihany koa no nisehoan’i Goth tamina endrika maromaro toa an-dry Olga, Rabenintsara, Siryla, Fanaiky izay anisan’ny tena nampiaiky ny mpijery ny fitoviana teo amin’izy roa lahy. Natao ihany koa ireo fihetsika sy feon’ireo mpanao politika malaza, sns.
Tsikaritra, nandritra ireto fampisehoana ireto ny traikefa matanjaka ananan’i Gothlieb hitazonana ny olona ho liana sy hifantoka tsara amin’ny zavatra teneniny sy fihetsika ataony. Na an-kolaka, indrindra ny mivantana, voarain’ny olona avy hatrany ny tiany hambara.